इन्डोनेसियामा मासुको लागि यसरी जिउँदै जलाइन्छ कुकुर, नर्क भन्दा कम छैन यो ठाउँ ! (हेर्नुहोस तस्बिर) - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»इन्डोनेसियामा मासुको लागि यसरी जिउँदै जलाइन्छ कुकुर, नर्क भन्दा कम छैन यो ठाउँ ! (हेर्नुहोस तस्बिर)
इन्डोनेसियामा मासुको लागि यसरी जिउँदै जलाइन्छ कुकुर, नर्क भन्दा कम छैन यो ठाउँ ! (हेर्नुहोस तस्बिर)
By रिता घिसिंग on १२ माघ २०७४, शुक्रबार १०:३४ रोचक खबर
पिएनपिखबर : इन्डोनेशियाको सूलाबेसी बजार आफ्नो क्रुरताका कारण बदनाम भैरहेको छ। केहि समय अघि यस्तो दर्दनाक भिडियो फुटेज सार्बजनिक भएको छ। जसमा यसरी दर्दनाक तरिकाले कुकुरलाइ मारेर कुकुरका मासु बेचिरहेको थियो। मासुको लागि कुकुरको टाउकोमा डण्डले हानेर आगोमा पोल्दिने गर्छन। कुनै कुकुर डण्डले हान्दा मर्छन भने कुनै आगोले पोल्ले बेला पनि जिउदै हुने गर्छन। नर्क भन्दा कम छैन यो ठाउँ।
रिपोर्टका अनुसार कुनै एक बर्गको मानिसले स्थानीय तहको सहायता लिएर यस्तो घृणित र क्रुर काम गर्ने गर्छन। यहाँ कुकुरको साथ साथै बिरालो, सर्प र चमेरोको पनि मासु बेच्ने गर्छन।
इन्डोनेशियामा यसलाई रोक्नको लागि डॉग मीट फ्री इन्डोनेशिया नामक सस्था पनि स्थापना गरेको छ। यसै अन्तर्गत कुनै सोशल एक्टिविस्टले सुलाबेसी बजारमा स्टिंग अप्रेशन गरेर यहाँको खतरनाक रहस्य बाहिर ल्याएको छ।
यस्तै चीनको ग्वांग्सी प्रान्तको यूलिन सिटीमा यति धेरै बिरोधका बाबुजुद पनि डॉग मीट फेस्टिवल मनाउने गर्दछ। १० दिनसम्म मनाइने यस चाडमा हरेक बर्ष हजारौ कुकुरलाई दर्दनाक तरिकाले मार्ने गरिन्छ। यसलाई बन्द गर्न लगातार बिरोध प्रदर्शन भैरहेको छ तर पनि आजसम्म यो बन्द हुन सकेको छैन।
यस फेस्टिबललाइ बन्द गर्नका लागि एनिमल राइट एक्टिविस्टले लगातार बिरोध गरिरहेको छ। अघिल्लो बर्ष यसलाई लिएर एक सर्बे पनि गरेको थियो। जसमा चीनका ६४ फिसदी मानिस यस फेस्टिबलको बिरुद्ध रहेको खुलासा भएको छ। १ करोड १० लाख भन्दा बढी मानिस भने यस चाडलाई बन्द गर्नको लागि पिटिशन साइन पनि गरिसकेका छन् । सर्बेमा ५१. फिसदी मानिस डॉग मीट ट्रेड सदाको लागि बन्द गर्न लागि परेका छन्।